Ny EU dia nanolo-kevitra ny hampiasa vola mihoatra ny 100 miliara amin'ny lamasinina hanamafisana ny fivezivezena eoropeanina, Fampiasam-bola ity dia mitambatra amin'ny famatsiam-bola miankina sy tsy miankina. tanteraka, ny fitambaran'ny fampiasam-bola dia hihoatra € 4,5 lavitrisa. Ny fampiasam-bola ho avy amin'ny alalan'ny famatsiam-bola vondrona antsoina hoe mampifandray Europe toerana. Raha afohezina, ny famatsiam-bola ho tonga avy any amin'ny vondrona vitsivitsy. Ireo vondrona ireo dia ahitana pirenena, manokana, sy ny banky fampiasam-bola.
Famatsiam-bola dia hanampy hanatsarana ny Eoropeana Travel rail Network. koa, ny fampiasam-bola dia hanampy hampitombo ny Safidy hafa solika ho an'ny fiaran-dalamby. Fanampin'izany, ny famatsiam-bola dia hanamboatra ny lalana izay fitaterana tsy misy aotra.
Tetikasa dia hifantoka amin'ny fototry ny tambajotra Eoropeana mandeha. € 719.5 tapitrisa ho an'ny Eoropa rail Network. € 99,6 tapitrisa ho an'ny lenta lalana fitaterana. koa, € 78,9 tapitrisa dia ho an'ny fampandrosoana seranana. Ary € 44.7 tapitrisa any afovoan-tany dia ho an'ny renirano.
Famatsiam-bola fanampiny an'ny EU ho an'ny € 37 miliara ho an'ny dia any Eropa
Araka ny sasany loharanom-baovao, Europe dia vola fanampiny € 37 Billion ao amin'ny fiaran-dalamby orinasa. Izany dia hanome vola bebe kokoa ny olona sy ny vola miditra asa. Ny tambajotran'ny lamasinina eropeana dia vokatry ny fitomboan'ny fahaiza-manao sy ny faharetana. Ireto ny sasany amin'ireo tetikasa ny € 37 Billion dia ampiasaina ho an'ny;
Raha tonelina ity dia 17 taona, nisokatra ho an'ny dia eropeana fotsiny izy io 2016. Noho ny Alpine tendrombohitra, noraisiko 2,400 mpiasa ny fandavahana ny alalan '. Ny tionelina efa ho ny halavan'ny dia 57 KM, manao izany ny tionelina lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Noho ny haben'ny ny tonelina, ny vidin'ny no € 11 lavitrisa.
Zavatra tsy raikitra rohy tionelina lava indrindra no ho naroboka tionelina eto amin'izao tontolo izao. Hifandray amin'i Danemark amin'ny nosy Alemanina Fehmarn ilay tionelina. Ny fitambaran'ny vidin'ny tonelina ity rohy ity dia € 7 miliara. Ity rohy ity dia hikapa ny fiaran-dalamby dia fotoana eo anelanelan'ny Stockholm ary Hamburg ny 2 ora. Ny entana indostrian'ny eo Alemaina, Danemark, ary Soeda nahazo tombony tonga nirohotra avy amin'io rohy, azo antoka fa hanatsara ny dia any Eropa ity.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feu-invest-1-billion-euros-european-travel%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)